Iindlela ezine Uzixinezele zona kunye nabantwana bakho
Imfundo yasemakhaya ngumthwalo omkhulu nokuzinikela. Ingabangela uxinzelelo, kodwa kuninzi kakhulu ukuba ngabazali besikolo samakhaya bayayicinezela ngakumbi kunokuba kufanelekile.
Ngaba unecala lokugxininisa wena okanye abantwana bakho ngokungenasidingo naluphi na olu lulandelayo?
Ukulindela ukuphelela kuwe okanye bakho abantwana ngokuqinisekileyo babeke uxinzelelo olungadingekile kwintsapho yakho. Ukuba uguquka ukusuka kwisikolo sikarhulumente ukuya ezikolweni zasemakhaya , kubalulekile ukukhumbula ukuba kuthatha ixesha ukulungelelanisa iindima zakho ezintsha.
Nangona abantwana bakho bengakaze baye esikolweni somthonyama, ukuguqula ukufunda ngokusemthethweni nabantwana abancinci kufuna ixesha lokutshintshwa.
Uninzi lwabazali bezilwanyana zasemakhaya beza kuvuma ukuba eli xesha lokuguqulwa lingathabatha iminyaka emi-2-4. Musa ukulindela ukuphelela ngaphandle kwesango.
Unokuba ubanjwe kwisicu sokulindela ukugqibelela kwezemfundo. ibinzana elithandwayo phakathi kwabazali basekhaya. Ingcamango kukuba uya kubambelela ngesihloko, ubuchule, okanye ingqiqo kuze kube yinto ecacileyo. Unokuva abazali bezindlu zasemakhaya bathetha ukuba abantwana babo bafumana ngqo iA ngenxa yokuba abaqhubekiyo kude kube lula ubuchule.
Akukho nto iphosakeleyo ngolu hlobo - eqinisweni, ukukwazi ukusebenza kwiqondo kuze kube yinto umntwana eyiqonda ngokugcwele enye yeenzuzo zezindlu zasemakhaya. Nangona kunjalo, ukulindela i-100% kumntwana wakho konke ixesha kunokukhathazeka ngenxa yakho bobabini. Awuvumeli iimpazamo ezilula okanye umhla.
Kunoko, unokuba unqwenela ukugqiba isigqibo sepesenti. Umzekelo, ukuba umntwana wakho uhlaziya i-80% ephepheni lakhe, uyaziqonda ngokucacileyo imbono kwaye aqhubeke. Ukuba kukho uhlobo oluthile lwenkinga eyenza ibanga elingaphantsi kwama-100%, sebenzisa ixesha elibuyele kulo mgaqo. Ngaphandle koko, zinike wena nomntwana wakho inkululeko yokuqhubeka.
Ukuzama ukugqiba zonke iincwadi
Abazali besikolo sabantwana basoloko benetyala lokusebenza phantsi kokucinga ukuba kufuneka sizalise ngalinye iphepha elilodwa lekharityhulam esisisebenzisayo. Uninzi lweekharityhulam zephaya zamakhaya ziqulethe izinto ezaneleyo zonyaka wesikolo ezingama-36, ngokuthatha iveki yesikolo seentsuku ezi-5. Oku akuyi kulandelelanisa ukuhamba kwintsimi, i-co-op, iishedyuli enye , ukugula, okanye ezininzi zezinto ezinokubangela ukuba ungagqiba yonke incwadi.
Kukulungele ukuqedela ininzi yale ncwadi.
Ukuba umxholo ngowona owakhiwe kwiingcamango ezifundwe ngaphambili, ezifana nezibalo, amathuba ukuba izifundo zokuqala eziliqela ziza kuhlaziywa. Enyanisweni, oku kudla ngokuba yinto yam intando yam abantwana yokuqala incwadi entsha yematriki - kubonakala kulula kuba okokuqala kuba zixhobo eziye zafunda.
Ukuba akusiyo isifundo esekelwe kwisigqibo - imbali, umzekelo - amathuba, uza kubuya kwizinto kwakhona ngaphambi kokuba abafundi bakho baphumelele. Ukuba kukho izinto ozivelayo ukuba kufuneka uzikhuphe kwaye ngokucacileyo awuyi kuba nexesha, ungathanda ukucinga ukuhamba ngeenxa zonke kwincwadi, ukuyeka ezinye izinto, okanye ukumboza izinto ngeendlela ezahlukeneyo, ezifana ukuphulaphula i-audiobook ngesihloko ngelixa uqhuba iimpawu okanye ukhangele uxwebhu olubandakanyekayo ngexesha lesidlo sasemini.
Abazali bezindlu zasemakhaya banokuba netyala lokulindela umntwana wabo ukuba azalise yonke ingxaki kwiphepha ngalinye. Inkoliso yethu inokuthi sikhumbule indlela esivuya ngayo xa omnye wethu ootitshala esitshilo ukuba sifeze kuphela iingxaki ezingenakulinganiswa kwiphepha. Sinokwenza oko nabantwana bethu.
Ukuba uthelekisa ikhaya lakho kumakhaya omhlobo wakho (okanye kwisikolo sikarhulumente sasekuhlaleni) okanye abantwana bakho kwintsapho yomnye umntu, umgibe wokufananisa ubeka wonke umntu phantsi kwengcinezelo engadingekile.
Ingxaki xa kuthelekiswa kukuba sinqwenela ukuthelekisa ngakumbi ngakumbi komnye umntu. Okubangela ukuba singaqiniseki njengoko sigxininisa kuzo zonke iindlela esingazilinganisiyo kunokuba sifake kwizinto esizihamba kakuhle.
Ukuba sifuna ukuvelisa abantwana be-cookie-cutter, yintoni inqaku lezindlu zasemakhaya? Asikwazi ukufumana yonke imfundo njengabantu abancedisa ukuhlala ekhaya, baze bathuke xa abantwana bethu bengayifunde ngokucacileyo oko abantwana bafundayo.
Xa ulingeka ukuthelekisa, kunceda ukujonga ukuthelekisa ngokuchanekileyo.
Ingaba le nto umntwana wakho kufuneka ukuba uyazi okanye akwenze?
Ingaba kukho into eya kunceda amakhaya akho?
Ngaba kulungele intsapho yakho?
Ingaba umntwana wakho ngokwenyama, ngokomoya, okanye uphuhliso olukwazi ukwenza lo msebenzi okanye ukufeza le ngakhono?
Ngamanye amaxesha, ukuthelekisa kusinceda siqonde izakhono, iingcamango, okanye izinto esingafuna ukuzibandakanya kwizindlu zamakhaya, kodwa ukuba yinto engenakunceda intsapho yakho okanye umfundi wakho, qhubeka. Ungavumeli ukuthelekiswa okungekho sikweni kufaka uxinzelelo kwikhaya lakho nasesikolweni.
Ukungavumeli i-Homeschool yakho ukuba iguquke
Singaqala njengabazali besikolo, kodwa kamva sifunde ukuba ifilosofi yethu yemfundo ihambelana noCharlotte Mason . Singaqala njengabantu abangaqhelekanga esikolweni ukuba bafumane ukuba abantwana bethu bakhetha iincwadi zezifundo.
Akuqhelekanga kwintsimi yentsapho yokufunda isikolo ukuguqula ixesha, bekhululekile xa befumana ukhululekile kunye namakhaya okufundela okanye baqulunqwa ngakumbi njengoko abantwana babo bekhula.
Ukuvumela ukuba amakhaya akho ukuba aguquke aqhelekileyo kwaye alungile. Ukuzama ukubambelela kwiindlela, iikharityhulam, okanye iishedyuli ezingasayi kuba nengqiqo kwintsapho yakho iya kubeka uxinzelelo olungapheliyo nonke.
Izindlu zasemakhaya ziza kunye neentlobo zazo zokubangela uxinzelelo. Akukho sidingo sokongeza ngaphezu kwayo. Makuyeke ukulindela izinto ezingenangqiqo kunye nokuthelekiswa okungekho nto, kwaye mayeke ukuba amakhaya akho ajongane njengoko intsapho yakho ikhula kwaye ishintsha.
Amacandelo okuFunda weeNyunithi ukuPhakamisa nasiphi na isitayela sasekhaya sasekhaya
I-Cinco de Mayo Ipapashwe ngokukhawuleza
Ngaba iiHomeschooling Right for Your Child?
Imfazwe Yehlabathi I: Imfazwe Yehlabathi
Ziziphi iintlanga zaseAsia ezingakaze zihlangane neYurophu?
Indlela yokujonga i-Recalls iTire
Iingcaphuno eziphefumlelweyo kwimfundo yeempendulo ze-Back-to-School
Zonke iziThutho zikaRhulumente ezingama-18 kwiMbali yase-US
Indlela yokudweba i-Cat kwi-Graphite Pencil
Umda - I-MySQL Command